नारायणी नदीमा ‘मिनी पानीजहाज’ चलाउने तयारी – live 60media
चितवन – चितवनको नारायणी नदीमा सञ्चालन हुने मिनी पानीजहाज (क्रुज सिप) छिटै सञ्चालन हुने भएको छ ।
यसअघि यसको परीक्षण भइसकेको छ ।
जहाज चलाउने क्याप्टेनसहित मुख्य कर्मचारीहरु समेत छनौट गरिसकेको कँडेलले बताउनुभयो । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १६ ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनको काप्रेघाटमा बनेर बसेको ‘क्रुज सिप’ (मिनी पानीजहाज)को नारायणी नदीमा ‘टेष्ट ड्राइभ’ समेत सफल रुपमा सम्पन्न भइसकेको थियो ।
दुई तलामा बसेर नदीको सयर गर्न सकिने क्रुज हेर्दा दुरुस्तै पानीजहाज जस्तो देखिन्छ । भित्रै रेष्टुरेन्ट र सांगीतिक कार्यक्रमको स्टेज, सुटिङ गर्ने ठाउँ, बैठक बस्न सकिने हल, सेल्फी खिच्ने स्थान, चालक दल बस्ने ककपिट छ । बनोट र आकारले नदीमा चल्ने पानीजहाज जस्तै देखिन्छ ।
क्रुजको पहिलो तलामा ९० र दोस्रो तलामा १०० जना मानिस अट्ने क्षमता छ । पहिलो तलाको अगाडिपट्टि सेल्फी खिच्ने, चलचित्र वा म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्ने खुला ठाउँ छ । यहाँ १५ जना उभिन मिल्छ ।
यहाँ बैठक पनि गर्न सकिन्छ । दोस्रो तलाको एक छेउमा विशिष्ट व्यक्तिका १० सिट बनाइएको छ ।क्रुजको तल्लो भागमा कुनै कारणले प्वाल परेर वा क्षति भएर पानी पसेमा सबै भागमा पानी नजाने गरी डिजाइन गरिएको छ ।
महिला र पुरुषका लागि अलग-अलग शौचालय, काउन्टर र बार बनाइएको छ । मिनी पानीजहाजभित्र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दा आवश्यक ड्रेस चेन्जिङ रुम बनाइएको छ । एसी जडान गरिएको छ । क्रुजको भित्री भागमा राखिने कुर्सी आइसकेका कँडेलले बताउनुभयो ।
क्रुज सिपमा १५ जना चालक दलका सदस्य र प्राविधिक हुनेछन् । क्रुज राख्न च्यानल काटेर १५ फिट गहिरो पार्किङ स्टेशन बनाइएको छ । क्रुजबाट चढ्न र झर्न यहीँ नै आउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । दैनिक तीन सिफ्ट,३५ किलोमिटर प्रतिघण्टा
← काठमाडौंमा रहेका सर्वसाधारणलाई भर्खर आयो अत्यन्तै दुःखको खबर।
डिभोर्सपछि एक्लै जीवन हाँकिरहेका १० महिला कलाकार ! →